Devonian fauna: mmepe na mmalite | Netwọk Mgbasa Ozi
El Oge Devonian guzobere otu n'ime mpaghara ise nke nwere oge Paleozoic. Oge a nwere nnukwu mgbanwe ngbanwe ụwa na ebe obibi ndụ ụwa niile. Ọ dị ihe dị ka afọ nde 56 na ìgwè dị iche iche nke anụmanụ nwere ike ịzụlite, ọkachasị ndị bi na mmiri. Enwekwara mgbanwe n’ebe obibi nke anumanu ala, ebe osisi buru ibu na anumanu ala mbu putakwara. Na Anụmanụ Devonian A maara ya dịka onye ịgba ịnyịnya kachasị anya. Ọ bụ ezie na a na-eche na oge a ga-enwe mkpochapụ mbibi ebe ihe karịrị 80% nke ụdị ahụ furu efu.
Yabụ, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara anụmanụ Devonian.
1 Mmepe mmepe nke Devonian
2 Mmiri mmiri Devonian
3 Lonichị obodo
Mmepe mmepe nke Devonian
Oge a zuru oke iji zụlite ndụ. Ma ọ bụ na okpomọkụ dị mma n'oge a ma kwe ka ezigbo mmepe nke fauna na flora. Oké osimiri nile dị n'oge a nwere ụkpụrụ obibi dị elu. Ma ọ bụ na n'ime oke osimiri ndị ahụ kachasị ochie dị ka ogbe nwere ike itolite. Speciesdị dị iche iche nke siliceous malitere ịpụta na site na-ama ama na coral coral, ha nwere ike ịmalite mgbanwe dị iche iche. Silongous sponges nwere nguzogide ka ukwuu nye ọnọdụ gburugburu ebe obibi na ọnụnọ nke ndị na-eri anụ.
Okpokoro coral na benthic algae sokwa rụọ ọrụ dị mkpa na mmepe nke morphology nke oké osimiri.. Nnukwu oke mmiri gbatịpụrụ n'oge ahụ site n'ebe dị anya nke ọtụtụ puku kilomita nke gafere otu kọntinent. Umu anumanu nke ndi Devon nwere otu n’ime mgbanwe kasịnụ n’ime usoro ihe eji eme mmiri ka mmiri anụmanụ nektonic pụta. Ọtụtụ n'ime ụdị anụmanụ ndị a dị ọhụrụ na-eri anụ.
Mgbe enwere ọhụụ ọhụrụ nke ụdị ma ọ bụ mmegharị maka gburugburu ebe obibi, a na-etinye nrụgide na agbụ trophic. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na enwere anụ ọhụụ ndị na-achụ nta anụ ha, ọ na-akwalite omume ọhụrụ na ụdị ahụ nke kwesịrị ịgba ọsọ ma gbanahụ ọnọdụ ndị a na ndụ. Nke a sụgharịrị ịbụ oge evolushọn na mmegharị n'ọnọdụ ọhụrụ nke na-eweta ngbasawanye nke mkpụrụ ndụ ihe nketa nke anụmanụ na osisi.
N'ime ogbe mmiri anyi na egosiputa mmepe nke ngbasa nke mollusks na eme ka ammonoids mbu puta. Ammonoids a sitere na mgbanwe nke nautiloids n'oge obere Devonian fauna. Nautiloids dịgidere n'agbanyeghị na enwechaghị ọtụtụ na ọtụtụ.
Mmiri mmiri Devonian
N’ebe obibi mmiri mmiri, bivalves malitere ịba ụba na ịwakpo. N'oge ahụ ndị otu trilobites bidoro ịda mba nwayọ nwayọ ọbụlagodi na ụdị ndụ ọhụụ ka dị. E nwere ụfọdụ nnukwu trilobites. N'aka nke ọzọ, anyị nwere arthropods eurypterid nke gara n'ihu ịbụ otu ìgwè dị oke mkpa nke ndị na-eri anụ.
N'oge mmeba a, mmiri mmiri nke ndị Devonian nwere nnwale n'eto azụ. Karịsịa ọ bụ placoderms na sharks, ma ndị osteichthians na sarcopterygians, nke eweputa oria terrestrial, dika actinopterygians. Otu ikpeazụ a bụ ndị nọkarị n'okike. E nwere ndị ọkà mmụta sayensị maara Devonian fauna dị ka afọ azụ. Nke a bụ n'ihi na e nwere azụmasị dị iche iche ichekwa echekwara echekwa nke azụ ndị a, ọtụtụ n'ime ha na-asọba ọdọ mmiri ọdọ mmiri.
N'oge a ndị coelacanth adịworị ụbọchị. N'etiti ụmụ anụmanụ nke Devonian, placoderms malitere ịkarị oke ostracoderms. Ihe ndị a na - eme Ichthyostega na Acanthostega sitere na agbụrụ sarcopterygian. Mkpụrụ ndụ abụọ a jikọtara na ntụgharị nke azụ na tetrapods. Emere mgbanwe a n’akụkọ ihe mere eme n’oge mgbanwe n'etiti anụmanụ na Devonian na Oge Carboniferous.
Otu nnukwu obi abụọ dị na azụ ndị a bụ na ha bụ mmiri dị mma ma ọ bụ nke mmiri. Obi abụọ a sitere na eziokwu ahụla ọtụtụ azụ mmiri dị ọcha na nkwụnye nke aja aja uhie. Mpaghara a bụ nke ụwa ma mechie ya site na mmechi nke oke osimiri Iapetus. Nke a bụ isi ihe kpatara obi abụọ na azụ ndị a bụ mmiri dị mma ma ọ bụ mmiri mmiri. A na-enweta ihe ndekọ ndị mbụ e nyere azụ̀ a site n’ụzọ mmiri, ọ bụ ezie na ọtụtụ n’ime ha ha bụ azụ silurus nke mmiri adịghị. N’ebe ahụ ka ụdị azụ dị iche iche si pụta.
Uzo ozo di iche nke neme ka umu anumanu nke ndi devonian wepu aka bu ichikota ala. N'oge Oge Silurian arthropods wakporo ala ahụ. Agbanyeghị, data izizi sitere na nguzobe nke Lower Devonian Rhynie Chert nke Scotland. Ihe omuma a nwere obodo dum osisi na ogbu na nkwonkwo ndi nyere otutu ihe omuma banyere ihe omumu nke oge ochie nke gburugburu ala.
E nwere ọtụtụ ụdị ahịhịa nke nyeere aka na nkwonkwo, gụnyere akpị, obere, na ụmụ ahụhụ nwere nku, ịzụlite ma nwee usoro okike kwesịrị ekwesị. Mmiri na mmiri na-edozi mmiri aghaghị ịmalite na sistemụ nke ụwa n'ihi mmepe nke iku ume ikuku. Agbanyeghị, ọ na-esiri ike igosipụta na ndekọ data fosil na enwere ọnụọgụ ziri ezi na usoro nke mbata, akpị na centipedes na usoro okike nke ụwa. Ndi mmadu a nile nwere umu di iche-iche di iche-iche ma nwekwaa ha ka onodu onodu gburugburu ebe obibi dikwa iche na ekele nke mmepe osisi.
Tupu ọdịdị nke akwụkwọ akụkọ e ji ede ihe, ụwa ochie oge ochie jupụtara na arthropods. E nwere esemokwu ụfọdụ na-aga n'ihu na-agbasa n'ụwa sayensị ma na-ekwu banyere oge mgbe vertebrates na-esi na mmiri pụta na ihe ndị mere ka ha mee. Ekwesiri ikwenye na o siri ike iche na anumanu nwere usoro okike nke mmiri na-emecha megharia mgbanwe nke gburugburu ebe o bibeghi na o dighi mkpa ibi.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere anụmanụ ndị Devonian.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Anụmanụ Devonian